လက်ရှိ စက်သုံးဆီဈေးမှာ အရှုံးဖြင့် ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ် မယုံပါက အချိန်မရွေး လာရောက်မေြး - Yangon Media Group
လက်ရှိ စက်သုံးဆီဈေးမှာ အရှုံးဖြင့် ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ် မယုံပါက အချိန်မရွေး လာရောက်မေြး
လက်ရှိတွင် စက်သုံးဆီကို အရှုံးဖြင့်ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး မယုံပါက အချိန်မရွေးလာရောက်မေး မြန်းနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင် သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ ”လက်ရှိ စက်သုံးဆီရောင်းနေတဲ့ဈေး တွေက အရင်းဈေးအောက်ရောက်ပြီး ရောင်းချ ပေးနေတာပါ။ မယုံဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်မ ရွေး ကျွန်တော့်ဆီလာခဲ့ပါ။ ရှင်းပြပါမယ်”ဟု ၎င်းက စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
စက်သုံးဆီအရင်းဈေးတက်သည့်အချိန်တွင်ရောင်းချသည့် ဈေးမတက်ဘဲ အချိန်အတော်ကြာရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်း၊ အသေးစိတ် စိတ်ဝင်စားပါက လာရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး နှစ်နှစ်စာခန့် စာရင်းပြုစုထားသည့် အချက်အလက်များရှိပြီး အသင်းတာဝန်ရှိသူများကလည်း ဖြေကြား ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”တက်တုန်းက တက်သွားတယ်။ ပြန်မကျဘူးလို့ ဝေဖန်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီး သူ့ဘက်ကလည်းထောက်ပြပါ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ရှင်းပြပါ့မယ်။ ဒီကိစ္စတွေက ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိ ဒေါ်လာဈေးကျပ် ၁၅၆ဝ အချိန်တွင် စက်သုံးဆီတင်သွင်းသူများ၏ အရင်းဈေးသည် တစ်လီတာလျှင် ၁ဝ၁၃ ကျပ်ဖြစ်ပြီး လက်ကားဈေး ၁ဝ၂၅ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေကြောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ မြေငှားရမ်းခ၊ အလုပ်သမားစရိတ် စသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် လက်လီဆိုင်များ၏ အရင်း ဈေးမှာ ကျပ် ၁ဝ၇ဝ ဖြစ်သွားသော်လည်း ၁ဝ၂၇ ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေကြောင်း၊ ယခင်က လက် ကားနှင့် လက်လီရောင်းချမှုများသည်လည်း အရင်း ဈေးအောက်တွင်သာ ရောင်းချပေးနေခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”၁၆၄၂ ကျပ် ဒေါ်လာဈေး ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်တွေမှာက ၉၉၅ ကျပ် ရောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ကားရောင်းတဲ့ဈေးက ၁ဝဝ၇ ကျပ်ရောင်းတယ်။ အင်မတန်မှ အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ မှန်ကန် ကြောင်းကတော့ ကြိုက်သလိုစစ်လို့ရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခင်က လက်လီရောင်းချသည့်ဆိုင်များက ပိုက်ဆံလို၍လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်ရလို၍လည်းကောင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဈေးလျှော့ချ ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဇွဲကောင်းတယ်။ ကြောက်ကြတယ်။ လူတွေဝေဖန်မှာရော ဘာရော ကြောက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြိုင်တာတွေလည်းပါတယ်။ ဈေးကို သူတို့ရောင်းချင်တဲ့ဈေးနဲ့ လျှော့ရောင်းတယ်။ စေတနာတွေကောင်းပြီး လျှော့ရောင်းတယ်လို့ ကျွန် တော်တို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အရင်းအောက်ကို လျှော့ရောင်းကြတယ်။ နိုင်ငံခြားဆီဈေးကျ ဒေါ်လာဈေးကျနေတဲ့အချိန်ကတည်းက အရင်းအောက်ချ ရောင်းခဲ့တယ်။ အပြင်ဘက်ကမြင် သည့်အမြင်မှာ ဒီဘက်က ဒေါ်လာဈေးကျတာကိုပဲ တွေ့တာ၊ အရင်းဈေးအောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အဲဒီလောက်ထိ မတွေ့နိုင်ကြဘူး။ အထင်လွဲမှားစရာ တွေ ဖြစ်နေကြတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အရှုံးခံရောင်းချနေသည်ကို ယခင်က မကန့်သတ်ခဲ့သော်လည်း အမြတ်ယူသည့်အခါတွင် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ရန်နှင့် လက်လီရောင်းချမှုများကို အမြတ်လေးရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်ရောင်းချခြင်းမပြုရန်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ အရင်းအောက်လျှော့ ရောင်းချမှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ရန် ညှိနှိုင်းထားပြီး နိုင်ငံတကာတွင် အရင်းဈေးအောက် လျှော့ရောင်းခြင်းကို ဥပဒေအရ ခွင့်မပြုကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ”အရင်းဈေးအောက် လျှော့ရောင်းနေမှုဟာ ရေရှည်တွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးအတွက် အလားအလာမကောင်းဘဲ အခုလို ပြဿနာတွေပေါ်လာမယ်” ၎င်းက ပြောသည်။ ယခုအချိန်တွင် နယ်ရှိ ဆိုင်တချို့သည် အရှုံး ပေါ်သဖြင့် ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်နိုင်ဘဲ ဆိုင်ပြန်လည် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ကနေဒါပါလီမန် ပြန်လည်ရ?
အီရန်သည် နျူကလီးယား ဂိုဒေါင်တစ်လုံး လျှို့ဝှက် တည်ဆောက်နေဟု နေတန်ယာဟု ပြော
ကျပ် ၁ဝဝဝ တန် အောင်ဘာလေထီ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု စ??
သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်းအပေါ် ပြောစရာ
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ လွယ်ခန်းကျေးရွာ အနီး၌ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ် ပစ္စ??
နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် Marvel ရုပ်ရှင်တွေမှာ မင်းသား ခရစ်ဟမ်းဝေါ့သ်ကို မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေ
ဝါရင့်အနုပညာ သတင်းထောက် ဝီကီရော်ဆင်ဒူးဂလပ်စ် အသက်(၇၆)နှစ်တွင် ကွယ်လွန်